Ngokuthuthuka kwezikhathi, ukuze kuhlangatshezwane nezimfuneko zokuphepha, ukonga amandla kakhulu, ukunciphisa umsindo, nokunciphisa ukungcola okungcolisayo, inqubo yokwelashwa ebusweni, i-vacuum plating isiphenduke inkambiso entsha ekuvikelweni kwemvelo..Ngokungafani ne-electroplating ejwayelekile, umshini electroplating kuyinto imvelo kakhudlwana. Ngesikhathi esifanayo, i-vacuum electroplating ingaveza umphumela omnyama nge-gloss enhle engatholwa yi-electroplating ejwayelekile..
I-vacuum electroplating ngokuyisisekelo iyinto yokubekwa ngokomzimba, lapho kufakwa khona igesi ye-argon ngaphansi komshini, futhi igesi ye-argon ishaya impahla eqondiwe, futhi ama-molecule ahlukanisiwe wento ebhekiswe kuyo ahlelwa yizimpahla eziqhubayo ukwenza ungqimba lwendawo olufanayo nolushelelayo..Kule nqubo yokuqothula, okubhekiswe kukho kubaluleke kakhulu, ngakho-ke zithini izinto ezisetshenziswayo kunqubo ye-vacuum electroplating??Namuhla, umhleli uzokunikeza isingeniso esinemininingwane.
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ukusetshenziswa kwezinto ezihlosiwe ku-vacuum electroplating kunezici ezilandelayo:
(1) Izinsimbi, ama-alloys noma ama-insulators angenziwa ezintweni ezincane zefilimu.
(2) Ngaphansi kwezimo zokubeka ezifanele, ifilimu elincanyana lokuqanjwa okufanayo lingenziwa kusuka kuzinhloso eziningi futhi eziyinkimbinkimbi.
(3) Ngokufaka ioksijini noma amanye amagesi asebenzayo endaweni yokukhipha, ingxube noma inhlanganisela yezinto ezihlosiwe kanye nama-molecule egesi angenziwa.
(4) Isikhathi sokufaka sokukhomba samanje nesikhathi sokukhama singalawulwa, futhi kulula ukuthola ukushuba okuphezulu kokunemba kwefilimu.
(5) Uma kuqhathaniswa nezinye izinqubo, kusiza kakhulu ekukhiqizeni amafilimu ayifomu yendawo enkulu.
(6) Izinhlayiya ezikhohlisayo cishe azithinteki ngamandla adonsela phansi, futhi izikhundla zelitshe kanye ne-substrate zingahlelwa ngokukhululeka.
(7) Amandla okubambelela phakathi kwe-substrate nefilimu angaphezulu kwe- 10 izikhathi zefilimu ejwayelekile yokufaka umusi, nangenxa yokuthi izinhlayiya ezikhutshaziwe zithwala amandla amakhulu, zizoqhubeka nokusakazeka endaweni eyakha ifilimu ukuthola ifilimu enzima futhi eminyene. Ngesikhathi esifanayo, amandla aphezulu enza ukuthi i-substrate idinge kuphela ifilimu i-Crystallized ingatholakala emazingeni aphansi okushisa.
(8) Ubuningi be-nucleation ephezulu esigabeni sokuqala sokwakheka kwefilimu, engakhipha i-ultra-thin film eqhubekayo engezansi kwe-10nm.
(9) Izinto ezihlosiwe zinempilo ende futhi zingakhiqizwa ngokuzenzekelayo nangokuqhubekayo isikhathi eside.
(10) Izinto ezihlosiwe zingenziwa ngezimo ezahlukahlukene, ngomklamo okhethekile womshini wokulawulwa okungcono nokusebenza kahle.
Lokhu okungenhla yisifinyezo somhleli wawo wonke umuntu. Ezinye izici zokusetshenziswa kwezinto ezihlosiwe ku-vacuum electroplating. Njengomkhiqizo omusha wobuchwepheshe, ukuvela kwezinto ezihlosiwe kuyintuthuko enkulu kubuchwepheshe bokwelashwa komhlaba..
Okwedlule: Izinzuzo zamatshe alinganayo e-cylindrical and planar magnetron sputtering
Olandelayo: Ukuthuthukiswa kwe-high-purity aluminium sputtering target umkhakha